Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kooxda hoggaanka cusub ee ay ku dhawaaqday Aprecia
Kyle Smith waxaa loo magacaabay Madaxweynaha iyo Madaxa Hawlgelinta ee Aprecia Pharmaceuticals, LLC, si degdeg ah wax ku ool ah. Mr. Smith waa mujaahid 10 sano jir ah oo la shaqeynayay Aprecia waxaana uu soo noqday madaxweyne ku xigeenka howlaha 3dii sano ee la soo dhaafay. Madaxweyne ahaan iyo Sarkaalka Hawlgelinta, Mr. Smith ayaa mas'uul ka noqon doona hoggaaminta hawl-maalmeedka ganacsiga.
Aprecia waxay sii xoojisay kooxdeeda hogaaminta iyadoo kor u qaadaysa Patrick Staudt Madaxweyne ku xigeenka Hawlaha, isla markiiba wax ku ool ah. Halyeeyga 14-sano ee Aprecia, Mr. Staudt wuxuu hogaamiyay East Windsor, hawlaha wax soo saarka ee NJ in ka badan sanadaha 10 wuxuuna muujiyay kartida iyo waayo-aragnimada si uu u hogaamiyo koboca la filayo, kobaca ballaaran ee tiknoolajiyada badan.
Mr. Smith iyo Mr. Staudt waxay ahaayeen tiir-dhexaadka taariikhda Aprecia ee tignoolajiyada iyo hal-abuurka wax soo saarka. Waxay ahaayeen kuwa wax ku darsaday aasaaska shirkadda oo ah hormuudka horumarinta iyo soo saarista alaabta dawooyinka iyada oo loo marayo 3D-Printing. Khibraddooda Aprecia waxay ka caawisay samaynta dhaqanka shirkadda iyo 3DP hal-abuurka wax-soo-saarka dawooyinka, iyo wax-soo-saarkooda ayaa abuuray dardar-gelin sii wadda inay sii dardar-geliyaan iyada oo loo marayo iskaashi muhiim ah iyo alaabooyin cusub.
"Sida aaladaha teknoolajiyada ee Aprecia ay sii ballaariyaan oo iskaashiga warshadaha ay horumariyaan, Aprecia waxay u baahan tahay karti iyo ilo dheeraad ah si ay u daboolaan baahiyahan sii kordhaya," ayuu yiri Chris Gilmore, Madaxa Sare ee Aprecia. "Waxaan nasiib u yeelanay inaan helno khabiirada tignoolajiyada ee khibrada leh iyo hogaamiyayaasha shirkadaha si ay kor ugu qaadaan una hagaan kobaca ururka si wanaagsan mustaqbalka."
Mr. Kyle Smith waxa uu shahaadada Master of Business Administration ka qaatay Jaamacadda Miami, iyo Bajlar of Science in Engineering Engineering oo uu ka qaatay Machadka Tignoolajiyada ee Georgia.
Mr. Patrick Staudt waxa uu shahaadada koowaad ee Sayniska ka qaatay Jaamacadda Drexel.